Ozi anyị nwetere n’aka ndị CBC na-akọwa n’otu nwanyị onye Calgary ga-aga nga mkpụrụ afọ iri na atọ. Ikpe mara Stacey Joy Bourdeaux maka igbu otu nwa ya nwoke. N’afọ 2004, Stacey gburu nwa ya ọ mụrụ ọhụrụ, ma na-achọkwa igbu nwa ya nwoke nke ọzọ gbara afọ ise.
N’ọnwa Ọgọst afọ a, Stacey kwetere n’ụlọ ịkpe n’ịkpe mara ya maka ịgbu ọchụ.
A makwara ya ịkpe ọzọ maka na ọ nwara ike ya igbu nwa ya nwoke nke ọzọ dị afọ ise, n’agbanyeghị na aka apụghị ya. Nwa ya nwoke nke ahụ ọ choburu igbu nọ n’ọnọdụ ọnwụ ka mma taa. Ọ naghị ekwu ụka nke ọ na-eghe ọnụ.>
A gụnyeere Stacey afọ ndị ọ nọgooro na mkpọrọ. Nihi nke a, n’ime afọ 13 ahụ e nyere ya, ọ ga-anọ nanị afọ itoolu na ọkara na nga tupu o nwere onwe ya.